पोखरा विमानस्थलम एकाबिहानै पुगे मन्त्री आले, कड्कि’दै सबैलाई झ’पारे ,,, भिडियोसहित !!
पोखरा विमानस्थलम एकाबिहानै पुगे मन्त्री आले, कड्कि’दै सबैलाई झ’पारे !
काठमाडौं : सुन्दरनगरी पोखरामा बन्दै गरेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलमा एका बिहानै मन्त्री प्रेम आले पुगेका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको निर्माण कार्यको
प्रगति सोचेअनुसार नभएको अवस्थामा मन्त्री प्रेम आले पुगेर सोको निरीक्षण तथा कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सुन्दर नगरी पोखरामा निर्माण सम्पन्न हुन लागेको अन्तरास्ट्रिय बिमानस्थ छिटो सम्पन्न गर्न र सुचारु गर्न धेरैले
आशा संगै आर्थिक प्रगती गर्नेमा अनुमान गरिएको छ ।
सोही क्रममा मन्त्री आलेले सोको क्रममा कर्मचारी तथा सम्बन्द्द निकाएले चित्तबुझ्दो काम गरेको नपाए पछि यस्तो सम्म भनेका छन् ।
थप: भैरहवा : तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले २०७१ माघ १ मा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना शिलान्यास गर्दा यहाँबाट नजिकै भारतको कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सुरसार थिएन ।
बुद्ध धर्मावलम्बीलाई लक्ष्य गरेर भैरहवाबाट करिब २ सय किमि दूरीमा रहेको कुशीनगरमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको छ । तर चार वर्षअघि निर्माण सकिनुपर्ने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कहिलेदेखि सञ्चालनमा आउने हो, कुनै टुंगो छैन ।
२०७८ मंसिर १९, आईतवार प्रकाशित0Minutes 100 Views